မေ 10, 2017 | အထူးပြောစရာမရှိ | ပစ္စည်းများ, ပစ္စည်းများ, ကလေး, အချိန်မတန်မီကလေး, tutorials
ပုံတွေကိုပုံစံကို download အတွက်ရရှိနိုင်ပါ. လှမ်း 1 With the two KNOT HAT pieces RIGHT SIDES together, pin around the seam allowance, leaving the lower edge open. တွယ်အပ် ,stitch and trim the seam allowances. လှမ်း2ဖြတ်2of the BEANIE HAT pattern pieces for the inner hat. With RIGHT SIDES together, fold the […]
ပုံတွေကိုပုံစံကို download အတွက်ရရှိနိုင်ပါ. လှမ်း 1 Begin by cutting out the pattern pieces. With RIGHT SIDES together, fold the darts. တွယ်အပ်, stitch and trim the seam allowance of the dart. လှမ်း2With the two hat pieces RIGHT SIDES together, pin around the seam allowance, leaving the lower edge open. တွယ်အပ် ,stitch […]
အထည်ချုပ် Bag သင်ခန်းစာ
ဇူလိုင်လ 13, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | ပစ္စည်းများ, tutorials
လှမ်း 1 လူအပေါင်းတို့သည်အဓိကအထည်ချုပ်အိတ်အပိုင်းပိုင်းနှင့်နံရံအပိုငျးပိုငျးထွက် Cut (မျဉ်းကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ဖို့တူညီတဲ့အပိုင်းပိုင်းကိုသုံးပါ). နောက်ကျောအပိုင်းအစထွက်လုပ်ကြံသောအားဖြင့် Begin. ထိုအခါသို့နောက်ကျောပုံစံအပိုင်းအစကိုဝေ3နှိမ့်ချလုပ်ကြံသောအားဖြင့်နှင့် dashed လိုင်းများကိုဖြတ်ပြီး. Remember to add 1.5cm seam allowance to the lower […]
မေ 19, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | ပစ္စည်းများ, tutorials
လှမ်း 1 အားလုံးအပိုင်းပိုင်းထွက် Cut. လှမ်း2အတူတူအတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်အိတ်ကပ်ကိုအပိုင်းပိုင်းညာဘက်နှစ်ဖက်ထားပါ. pin နှင့်ချုပ်. လှမ်း3ဒါကြောင့်တစ်ချိန်ကပြားချပ်ချပ် တင်. ခွင့်ပြုပါရန်အိတ်ကပ်ချုပ်ရိုးစရိတ်ချုံ့နှင့် clip ထွက်ညာဘက်နှစ်ဖက်လှည့်. လှမ်း4အိတ်ကပ်ညာဘက်နှစ်ဖက်ထွက် Turn နှင့်အပြားကိုနှိပ်. လှမ်း5Usealarge […]
မေ 17, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | ပစ္စည်းများ, နည်းစနစ်, tutorials
လှမ်း 1 ဗဟိုမှနှစ်ဖက်စလုံးကခေါက်ထားပြီးကြောင်းဘရာစီယာ elastic သိုင်းကြိုးသို့မဟုတ်ဘက်လိုက်မှုဖြတ်ထည်၏အရှည်ကိုသုံးပါ, ထို့နောက်ထက်ဝက်မှာထပ်နှင့်အစွန်းနီးစပ်ချုပ်. ရှည်လျားသော 50cm နှစ်ခုအရှည်နှစ်ခုအရှည် Cut 10 ရှည်လျားသောစင်တီမီတာ. သင်တို့သည်လည်းအချို့ဘရာစီယာသိုင်းကြိုးတွေ့ရှိချက်လိုအပ်ပါလိမ့်မည် (လျှောခြင်းနှင့်ကွင်း) ပြထားတဲ့အတိုင်း. […]
မေ 17, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | ပစ္စည်းများ, tutorials
လှမ်း 1 Begin by cutting out the back guitar piece, followed by the two front pieces (cut from the same pattern piece. Ensure to add the 1.5cm seam allowance to the cutline. Applyasmall square of the oil cloth fabric to both ends of the zip. This will be folded back and used to […]